०६८ सालमा मोहन वैद्य, विप्लवहरुसँग माओवादी फुटाएर गएका बादल ०७४ को निर्वाचनपूर्व फर्किंदा उनीसँग १३ जना घाघडान नेता थिए, अहिले पनि छन्– देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, सूर्यप्रसाद सुवेदी (पथिक), हितमान शाक्य, सरस्वती पोखरेल (१ नं. प्रदेशकी उपसभामुख), महेश्वर दाहाल, अमृता थापा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, ५ नं. प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्ती, त्यहींकै आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीसहित बादलसहित यी १३ जनाले पार्टी एकताअघि प्रचण्डलाई भेटे ।
प्रचण्डले पम्फाजीलाई प्रवक्तालगायत ‘पार्टी छाडेर जाँदा तपाईंहरु जे–जे पदमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही–त्यही पद दिन्छु । तर, एउटा शर्त छ, मेरो नेतृत्वलाई च्यालेञ्ज गर्न पाइँदैन । मैले त वैद्य, बाबुराम छोडेँ । मलाई ठीकै छ । पार्टीभित्र विचार राख्न पाइन्छ, छलफलमा भाग लिन पाइन्छ । तर, निर्णायक घडीमा मलाई साथ दिनुपर्छ ।’ भन्नुभयो ।
यसरी बल्लतल्ल बादल फाट्यो । प्रतीक्षा रह्यो, अब यो फाटेको बादलले कस्तो वर्षा ल्याउँछ ? सिमसिमे कि मुसलधारे ? अन्तरविरोध बाक्लिँदै गएपछि ललितपुरको धोवीघाटस्थित अगेनो लाउञ्जमा गत बुधबार माधव–प्रचण्ड पक्षधर नेता र मन्त्रीहरु जुटे । अनि, बादलको वर्षा त्यहाँ देखियो ।
उनले भने, ‘केपी ओलीमा पार्टी र सरकार चलाउने ल्याकतमै समस्या रहेछ । सोच्ने दृष्टिकोणमै समस्या देखेँ । गृहमन्त्री भएको हुनाले मैले विश्वासको वातावरणमा काम गरेको हुँ । दिनदिनै प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाएर काम गर्न पनि सकिँदैन थियो । त्यसैले म यताको कि उताको भन्ने प¥यो होला । साथीहरुसँग सल्लाह भयो ।
कुराकानी हुँदा अबचाहिँ निर्णायक पोजिसनमा जानुपर्छ भन्ने भयो । त्यसैले म मेरै मौलिकताअनुसारको लाइनमा आएँ ।’ उनले यसो भनेपछि हलमा गुञ्जिएको ताली पार्किङसम्म प्रष्ट सुनियो । जन आस्थाबाट !